बाइबल अध्ययन किन गर्नुपर्छ?
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कम्बोडियन करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश ताहिटी तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मले माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वायुनाइकी वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
आवरण लेख | बाइबल अध्ययन —सबैका लागि लाभदायी
मानिसहरू किन दुःखकष्ट भोग्छन्‌ र मर्छन्‌?
के ईश्वरले मेरो ख्याल राख्नुहुन्छ?
यस्ता प्रश्नहरू तपाईंले कहिल्यै सोध्नुभएको छ? संसारभरिका थुप्रै मानिसले जीवनका यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे सोच्ने गर्छन्‌। तर के यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सकिन्छ?
लाखौं मानिसको जवाफ यस्तो छ: “पाउन सकिन्छ।” तर तिनीहरूले किन यस्तो भन्न सके? किनकि तिनीहरूले यस्ता प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ बाइबलमा भेट्टाएका छन्‌। बाइबलमा के-कस्ता कुराहरू बताइएको छ, तपाईं पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि? मानिसहरूलाई बाइबलका कुराहरू बुझाउन यहोवाका साक्षीहरूले निश्शुल्क बाइबल अध्ययन गराउँछन्‌। * यस्तो प्रबन्धबाट तपाईंले पनि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
तर बाइबल अध्ययन गर्ने भन्ने बित्तिकै केही मानिसहरू हिचकिचाउँछन्‌ र यस्तो भन्छन्‌: “म असाध्यै व्यस्त छु।” “बाइबल बुझ्न साह्रै गाह्रो छ।” “बाइबलअनुसारै जीवन बिताउन सकिंदैन कि जस्तो लाग्छ।” तर केही मानिसहरू भने फरक प्रतिक्रिया देखाउँछन्‌। बाइबलले के सिकाउँछ भनेर बुझ्ने मौकालाई तिनीहरू खुसीसाथ स्वीकार्छन्‌। केही उदाहरण विचार गरौं:
“मैले क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू धाएँ, शिख मन्दिर र बौद्ध धर्मको गुम्बामा गएँ अनि विश्वविद्यालयमा धर्मको अध्ययन पनि गरें। तैपनि ईश्वरको बारेमा मैले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सकिनँ। त्यसैबेला एक जना यहोवाका साक्षी प्रचारको क्रममा मेरो घरमा आए। तिनले बाइबलबाटै मेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिएको देखेर म छक्क परें अनि बाइबल अध्ययनको प्रस्ताव स्वीकारें।”—जील, बेलायत।
“जीवनसम्बन्धी मेरा थुप्रै प्रश्न थिए। चर्चका पास्टरहरूले दिएको जवाफ मलाई चित्त बुझेन। तर मेरा प्रश्नहरूको जवाफ एक जना यहोवाका साक्षीले बाइबलबाटै दिए। तिनले बाइबलबारे अझै सिक्न चाहनुहुन्छ कि भनेर सोध्दा मैले खुसीसाथ स्वीकारें।”—कोफी, बेनिन।
“मरिसकेपछि के हुन्छ भनेर म बुझ्न चाहन्थें। मरेकाहरूले मानिसहरूलाई दुःख दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो तर बाइबलले यसबारे के बताउँछ भनेर पनि बुझ्न चाहन्थें। त्यसैले मेरो एक जना साथी जो यहोवाका साक्षी हुन्‌ तिनीसितै मैले बाइबल अध्ययन सुरु गरें।”—जोसे, ब्राजिल।
“मैले बाइबल पढ्ने प्रयास गरें तर बुझ्नै सकिनँ। एक जना यहोवाको साक्षी मेरो घरमा आउँदा तिनले बाइबलका भविष्यवाणीहरू स्पष्टसित बुझाइदिए। म अझै बाइबलका अरू कुराहरू बुझ्न चाहन्थें।”—डेनिस, मेक्सिको।
“ईश्वरले मेरो ख्याल राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा म पक्का थिइनँ। त्यसैले बाइबलका ईश्वरलाई प्रार्थना गरें। त्यसको अर्को दिन एक जना यहोवाको साक्षीले मेरो घरको ढोका ढक्ढक्याए अनि तिनले बाइबल अध्ययनको प्रस्ताव राख्दा मैले स्वीकारें।”—अन्जु, नेपाल।
यस्ता अनुभवहरूले येशूले भन्नुभएका यी शब्दहरूको सम्झना गराउँछ: “आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले परमेश्वरको मार्गनिर्देशनको खाँचो महसुस गर्छन्‌।” (मत्ती ५:३) मानिसलाई ईश्वरबारे बुझ्ने अर्थात्‌ उहाँको मार्गनिर्देशनको आवश्यकतासहित सृष्टि गरिएको थियो। त्यो आवश्यकता ईश्वरले मात्र पूरा गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँ आफ्नो वचन बाइबलद्वारा त्यसो गर्नुहुन्छ।
त्यसोभए बाइबल अध्ययन भनेको के हो? बाइबल अध्ययनले तपाईंलाई कस्तो फाइदा पुऱ्याउँछ? तपाईंले यसपछिका लेखहरूमा यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहुनेछ।
^ अनु. 8 बाइबलमा बताइएअनुसार परमेश्वरको नाम यहोवा हो।
बाइबलका केही तथ्यहरू
बाइबल: बाइबल ग्रीक शब्द बिब्लिया-बाट लिइएको हो जसको अर्थ हुन्छ: “स-साना किताबहरू”।
भाषा: ३९ वटा किताबहरू हिब्रू (केही भाग अरामी भाषामा) र २७ वटा किताबहरू ग्रीक भाषामा लेखिएका थिए।
लेखिएको अवधि: ई.पू. १५१३ देखि इ.सं. ९८ सम्म १,६०० वर्षको अवधिमा ४० जना लेखकद्वारा लेखिएको थियो। *
अनुवाद: बाइबल पूरा र आंशिकगरि २,५०० भाषाहरूमा अनुवाद भएको छ।
वितरण: बाइबल लगभग ५ अरब प्रति वितरण भइसकेको छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै वितरण हुने किताब बाइबल नै हो।
^ अनु. 23 ई.पू.-ले “ईसापूर्व” र इ.सं.-ले “इस्वी संवत्‌” -लाई संकेत गर्छ।
जीवनसित सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूको जवाफ केले दिन्छ?